Khangela uphinde usetyenzise ukusebenzisa amagama aqhelekileyo: i-Microstation - i-Geofumadas
NgoNovemba, 2014 cadastre, Microstation-Bentley
Ukukhangela nokutshintshwa ngumsebenzi osetyenziswa ngokuqhelekileyo, ndiyichazile kanye kanye Excel. Ngexesha lokulifaka kwimephu okanye kwi-CAD, amathuba okufumanisa oko sifunayo kunzima kakhulu, kuba akukhona kuphela khangela ngeempawu.
Ingxaki, faka iibhalo
Ndineemephu enezinto ezininzi zeenombolo ze-800. Ndifuna iinombolo zepropati ezimela izitrato, imilambo kunye nezinye iimpahla ekusebenziseni uluntu zinombhalo omnye kuphela.
Ingongoma kukuba, ukuze ndiyibuyise, ndifuna ukuba esikhundleni sokuba ne-92345, eyona nombolo yenani elinikezelweyo, unomlambo R, isitalato C, ilitye L, njl.
Ngoko ndifuna, umzekelo, iitekisi ezingentla kwe-92,000 ukubeka iR, ziyimilambo. Emva koko kwiicatshulwa ezingentla i-93,000 zibabeke iC, kuba zizitrato. blah, blah, blah
Sebenzisa iziboniso eziqhelekileyo
Oku kwinguqulelo zangaphambili ze-Microstation zihlala zikhona, kodwa ezivela kwiinguqulelo zeV8i, zizisa iteksi encinci elubonisa, kwaye inokuyenza okanye ingasebenzi.
Yisoloko iyenziwe ukusuka ku-Hlela> ukukhangela uphinde ufake indawo.
Iphaneli eboniswayo, isinika ithuba lokubeka oko sikufunayo, yintoni umxholo oya kuwutshintsha, kwaye ezinye iimeko ezifana nokulawulwa kweencwadi ezinkulu, ukukhangela kwiibhloko (iiseli), ucingo.
Khetha ukhetho "Sebenzisa ii-Expressions Regular", eqhuba i-tab ephezulu, ebonisa ukuba yiziphi izinto ezinokuthi zibekwe kwifowuni yokukhangela.
Khangela ukuba ndibeka itekisi ye-92, ibe ngamanqaku amathathu, ndinako onke amanani aphezulu kune-92,000. Ngoko ke ukhethe ukuba zitshintshwe ngeleta R.
Ngokukhethwa kweKhowudi, umboniso wokubhaliweyo kumbhalo okhethiweyo, kwaye ngoko uhamba ngokuya kwiindlela ezilandelayo.
Ukuba ndiyenza "Yenza konke", zonke izitriki ziya kuthatyathwa.
Ngokufanayo, ukutshintsha isicatshulwa sezitrato, esinesikhundla esingaphezulu kwe-93,000, into endiyidingayo ukubeka i-93 ... kwaye ibuyisele iC.
Olunye uhlobo lwamazwi aqhelekileyo
Amathuba okusebenzisa ezinye iimfuno zophando ziyahluka.
I ^ isimboli isetyenziswe ukubonisa ukuqala komgca. Masithi sinenombolo ye-292010, asiyi kufuna ukuba ifakwe. Emva koko, umtya uza kuba ... 92 ..., oya kufumana kuphela iitekisi eziqala nge-92, eneempawu ezintathu ezilandelanayo.
Isimboli se-$ sokuphela. Mhlawumbi ndifuna ukufumana iicatshulwa eziphela nge-10 inombolo, uze ubhale i-10 $
Inqaku lisetyenziselwa abalinganiswa, i-asterisk ye-zero okanye ngaphezulu, uphawu + lweenombolo 1 okanye ngaphezulu.
Ukuba silindele ukufumana amadijithi kuphela we-ASCII, ngoko sisebenzisa isichazi magama: dy, xa sinokulinda nje ngeelfabhethi, sisebenzisa:
Ukuba sifuna uluhlu lwabalingiswa, sinokusebenzisa iibakaki
Ukuze ukwazi ngokubanzi, ndincoma izinto ezisisiseko: Wikipedia.
Post edlulileyo«Edlulileyo Inkomfa ye-2014 yeNgqalasizinda: Ukuphefumlelwa kwama-Hispanics
Post Next Manager Spatial: Lawula iinkcukacha ezingomhlaba nangokugqibeleleyo, nokuba ukusuka AutoCADOkulandelayo "